Maxaan ka ogaanayaa boggaga ugu sarreeya ee SEO si loo dhiso boggeyga?
Ma ogtahay sababta dib u noqosho ay muhiim u tahay SEO? Dhibaatadu waxay tahay in dad aad u badan oo la yaqaan mawduuca xiriirinta websaydhada tayada leh waxay aaminsan yihiin in ay ku biirayaan go'aanka kama dambaysta ah ee Google ee ku saabsan boosaska jagooyinka raadinta - bog kasta, blog, iwm.Dabcan, soo jeedintaan ayaa macno samaynaysa. Dhab ahaan, si kastaba ha ahaatee, daraasadihii dhowaa waxay xaqiijiyeen in bogg kasta oo xiriirka ah ee xiriiriyaha organic-ka ah (haddii kale, backlinks sare) ayaa dhab ahaantii ka mid ah 3da ugu caansan ee muhiimka ah ee lagu qiimeeyo darajo sare ee Google search algorithm.
Dabcan, muhimada ugu muhiimsan ee dib-u-qabashada tayada ayaa si fiican u yaqaan dhammaan qof kasta oo ku lug leh warshadaha raadinta naqshadeynta. Hase yeeshee, saameyntooda ugu dambeeysa waxay noqdeen kuwa ka xoog badan sidii hore - taasi waa sababta ay tahay inaad ogaato wax walba oo ku saabsan fikradda sare ee SEO-ga, sinnaanta SEO, sinnaanta backlink iyo juice link. Si aad u hesho sawir buuxa oo ah Mashiinka Raadinta iyo xiriirinta websaydhka, waxaan doonayaa inaan ku bilaabo ereyada aasaasiga ah.
Maxaa ka dhigaya fikradda ugu sareysa SEO?
Ugu horreyntii, ereyga "backlink" wuxuu u taagan yahay xiriirka soo socda ee ka yimaada bogga saddexaad ee internetka, blog, ama laga yaabo in ilo kale oo internetka laga helo internetka. Marka xigta, ereyga "kore" wuxuu sharxayaa muuqaal xoog leh ama waxqabad tayo leh ee dhabarka - ka eeg aragtida SEO. Dhammaan ereyada, "SEO" macnaheedu waa in xiriirada websaydhka noocaas ah ay saameyn ku yeeshaan qiimeynta mashiinka raadinta - ama mid wanaagsan, ama wax xun, iyo mararka qaarkood xitaa dhexdhexaad ah. Xaqiiqdii, waxqabadka dhabta ah ee dhabarka ah ee SEO-ga guud ahaan waxay ku xiran tahay aasaaska astaamaha iyo fikradaha muhiimka ah ee lagu soo koobay.
Aan aragno dunida aduunka oo ah nidaam caalami ah oo ka sameysan tiro badan oo ah goobo isku xiran iyo bogag internet ah. Wax walbana waa ay u socdaan - nuxurka webku wuxuu sii kobcinayaa horumarinta tirada dadka isticmaala - dad aad u tiro badan ayaa isticmaalaya, isticmaalka, wadaagista, iyo isku xirnaanta. Habkaas, shabakad kasta, iyo blog ayaa u muuqda in ay ku lug leeyihiin geedi socodka socda ee abuurista iyo qaybinta maamulka bogagga, PageRank, iyo maamulka domain.
Sayniska SEO ee website-kaagu wuxuu u egtahay in loo gudbin karo jaantuska guud ee suurtogalka - oo la sameeyey qiimaha guud ee bogga iyo maamulka domain, oo lagu taageeray awood awood buuxda ee dhinaca sare ee SEO. Ku dhigista Ingiriisi cad, sinnaanta SEO waa awooda website-kaaga si aad ugu wanaagsantahay SERPs Google. Taasi waa.
Casiir khudradeed (a. k. a. xiriirka sinnaanta) guud ahaan waxaa loo arkaa khabiirada istimaalaynta sida "hoose" ee guud ahaan sinnaanta guud. Sida aniga oo kale, waxaan garowsanahay fikradda juice isku-dhafan sida "qadarka" ee sinnaanta SEO dib loo rogay markii laba bog oo bog oo kala duwan la isku duwo. Sidaa daraadeed, xiriiriyaha casiirku waa socodka sinnaanta SEO - laga wareejiyay website-ka martigeliyaha ah oo loo wareejiyay bartilmaameedka.
Ka dib dhan, halkan waa xariiq hoose oo loogu talagalay fikirka ugu sareeya SEO. Xaqiiqdii, dhammaan ereyada aasaasiga ah ee hore loogu sheegay (i. e. , Sinnaanta SEO, xiriirka sinaanshaha iyo juice link) ayaa waxaa cilaaqad ku leh bulshada SEO - kaliya si aad u fahamto sida Google u shaqeeyo. Dhab ahaan, waxay yihiin luuqada ah casriyeynta casriga ah, ma aha mashiinka raadinta Google. Ereyada fudud, labadaba Google, iyo Webmaster Academy waxay marnaba si toos ah u bixiyaan tixraac sax ah arintan runta ah. Sidaa darteed, waxaan rajeynayaa in aan gaabnahay gaaban ee ku saabsan dib-u-eegista ugu sareeya ee SEO ah oo faa'iido kuu leh, ugu yaraan in ay u leeyihiin bilawga cad ee qulqulka qoto dheer ee ku xigta adduunka ee Search Engine Optimization Source .